I-Bay Beach Villa, Igumbi Lesibili Lezinga - I-Airbnb
I-Bay Beach Villa, Igumbi Lesibili Lezinga
I-En Suite Private Room esitezi sokuqala se-Large Villa ogwini lolwandle e-Grand Bay.
Igumbi liyimfihlo ngokwedlulele, lineminyango emikhulu eslayizayo enombono omuhle wolwandle ukusuka embhedeni wakho. I-Private Villa plunge pool kanye nephuli enkulu yomphakathi, kanye ne-Indian Ocean eqhele ngamamitha angu-20 kuphela nolwandle olunesihlabathi esimhlophe.
Igumbi lisesitezi sokuqala se-Villa elifinyeleleka kalula ukusuka ekungeneni komphakathi kanye nokundiza kwezitebhisi. Igumbi liyimfihlo kakhulu futhi lithulile linedamu lokucwila langasese elabelwe ezinye izivakashi ze-Villa, ichibi elikhulu lomphakathi elinamagumbi okuhlala ilanga nezambulela, kanye ne-Indian Ocean eqhele ngamamitha angu-20 kuphela.
Igumbi livulekile ngokwedlulele futhi lisezingeni lehhotela, okuhlanganisa nombhede wegwebu olingana nenkosi eyengeziwe, ikhabethe elikhulu nezihlalo ezimbili. Indlu yokugezela ye-en suite ineshawa enkulu, usinki kanye nendlu yangasese. Igumbi lihlanganisa nesiqandisi, iketela, okokusika kanye netiye nekhofi okuthokomele uma ufika. I-Villa iyikhaya lika-Benoit futhi inamagumbi amabili ngaphakathi kwe-Villa ehlala Izivakashi, elilodwa liphansi futhi elinye lisesitezi sokuqala, nokho womabili angasese kakhulu. I-Villa ihlanganisa indawo yokuhlala evulekile yohlelo oluvulekile kanye nekhishi lesimanje izivakashi ezikwazi ukulisebenzisa mahhala, kanye nendawo evulekile yompheme enezihlalo. I-Villa ihlanganisa nabasebenzi abahlanza ikamelo lakho nsuku zonke elifakwe phakathi nendawo ohlala kuyo (ngaphandle kwangeSonto nangeholide Lomphakathi) nganoma yisiphi isikhathi ngaphambi kuka-11am. Igumbi lakho lihlanganisa ilineni eliphezulu kakhulu lombhede, i-duvet nemicamelo, amathawula okugeza ekhwalithi namathawula amakhulu olwandle akhululekile ukuwasebenzisa, kanye nesiqandisi sakho ekamelweni.
Igumbi lingaphakathi kwe-4 Bedroom Villa enamakamelo amabili nje asetshenziswa izivakashi, elinye lihlala mina ngokwami umnikazi, kodwa wonke ahlukene kakhulu. I-Villa inkulu futhi igumbi lakho lomuntu siqu lingamamitha angu-23 square
Indawo yasekhishini eyabelweneNgaphandle kwendawo yokudlela yebhulakufesi/isidlo sasemini/santambama Indawo yokubhukuda yangasese kanye nechibi elikhulu lomphakathi elinamagumbi okuhlala ilanga nezambulela